Thursday April 16, 2020 - 13:02:37 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya magaalada Beled Weyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in isbedel dhanka maamulka ah uu xalay saqdii dhexe ka dhacay magaaladaasi.
Ciidamo hubeysan oo daacad u ah guddoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan ayaa xalay saqdii dhexe la wareegay dhammaan xarumihii maamulka magaalada iyo saldhigyo ciidan oo horay uu gacanta ugu hayay Cali Maxamed Caraalle oo dhowaan xilka qaadis lagu sameeyay.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Cali Jayte Cismaan guddoomiyaha cusub ee gobolka uu si hoose ula heshiiyay ciidamadii taabacsanaa Caraale kadibna ay si nabad gelya ah xarumaha muhiimka ah ugu gacan geliyeen maamulka cusub.
Saaka markii uu waagu baryay ayaa xarumaha maamulka lagu arkay mas'uuliyiin cusub oo ku shaqeynaya iyadoona Caraale uusan haysan hal askari oo ilaala u ah, arrintan ayaa si aad ah looga hadal hayaa bariga magaalada Beled Weyne waxayna dadku ku tilmaameen Inqilaan aan dhiig ku daadan oo lagu sameeyay guddoomiyihii hore ee gobolka.
Max'med Waare oo ah madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa dhowaan maamu cusub magacaab balse magacaabistaas ayaa khilaaf siyaasadeed ka dhalisay magaalada Beled weyne.